Author Topic: Polyhydramnios (Read 807 times)
« on: January 25, 2021, 11:24:45 PM »
Asc Dr waxaa la igu soo sheegay polyhydramnios.
Waxaa maxay polyhydramnios?
« Reply #1 on: January 29, 2021, 10:43:41 PM »
Polyhydramnios waa xaalad caafimaad oo sharraxaysa xad-dhaaf dheecaan amniotic ah oo ku jira kiish amniotic ah. Waxaa lagu arkaa qiyaastii 1% ee uurka. Waxaa caadi ahaan la ogaadaa marka tusmada dareeraha amniotic (AFI) ay ka weyn tahay 24 cm. Waxaa jira laba nooc oo bukaan socod eegto oo ah polyhydramnios: polyhydramnios joogto ah halkaasoo dheecaanka amniotic-ka ee xad-dhaafka ahi si tartiib tartiib ah isugu ururayo, iyo polyhydramnios ba'an oo dheecaanka amniotic-ka ee xad-dhaafka ahi si dhakhso leh u ururiyo
Ka soo horjeedka polyhydramnios waa oligohydramnios, ma ahan dheecaanka amniotic ku filan.
Xaaladaha la xiriira
Fetus-yada leh polyhydramnios waxay halis ugu jiraan dhowr dhibaato oo kale oo ay ka mid yihiin soo noqoshada xudunta, khalkhalka mandheerta, dhalashada dhiciska ah iyo dhimashada uurka. Markay umulayso ilmaha waa in laga baaraa cilladaha lagu dhasho.
Xaaladaha badankood, sababta saxda ah lama aqoonsan karo. Hal kiis ayaa laga yaabaa inuu yeesho hal ama dhowr sababood, oo ay ku jiraan infekshinka caloosha ku dhaca (TORCH), rh-isoimmunisation, ama chorioangioma ee mandheerta. Xilliga uurka ee uurka badan, sababta polyhydramnios badanaa waa cillad ku-shubidda mataanaha-ilaa-mataano ah. Sababaha hooyada waxaa ka mid ah dhibaatooyinka wadnaha, dhibaatooyinka kalyaha, iyo kaadi macaanka hooyada, taas oo keenta hyperglycemia uurjiifka iyo polyuria oo keenta (kaadida uurjiifka ayaa ah isha ugu weyn ee dheecaanka amniotic).
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa kala soocday polyhydramnios khafiif ah oo daran waxayna muujisay in dhibcaha Apgar ee ka yar 7, dhimashada dhalmada ka hor iyo qaab xumida qaab dhismeedka kaliya ay ku dhaceen haweenka qaba polyhydramnios daran.  Daraasad kale, dhammaan bukaanada qaba polyhydramnios, ee lahaa uurjiif ahaan caadi ahaan sonkor ahaan, ma muujin cilladaha koromosoomyada.
cilladaha caloosha iyo mindhicirka sida hunguriga atresia iyo duodenal atresia (oo keenaya awood la'aanta liqitaanka dheecaanka amniotic), anencephaly, wajiga oo kala dillaaca, qoorta oo badan, fistula tracheoesophageal, iyo hernias diaphragmatic. Xammeetida anular-ta keenta xannibaadda ayaa waliba sababi karta.
Bochdalek hernia, taas oo xuubka 'pleuro-peritoneal' (gaar ahaan bidixda) ay ku guuldareysato inay horumariso oo ay xirto kanaallada pericardio-peritoneal. Tani waxay keenaysaa in caloosha u soo baxdo ilaa daloolka wadnaha, uurjiifkuna uusan awoodin inuu liqo qadar ku filan oo ah dheecaanka amniotic.
ciladaha kelyaha ee uurjiifka ah ee keena kordhinta soo saarida kaadida inta uurka la leeyahay, sida ka hor dhalmada Bartter syndrome. Baadhista muruqa ayaa loo heli karaa xaaladahan.
cilladaha neerfaha sida anencephaly, oo wax u dhimaya falcelinta liqitaanka. Cudurka 'Anencephaly' waa cillad ku dhow dhow xididdada neuropore (cilladda xididdada xididdada dareema). Haddii qanjirka 'ropral neuropore' uu xirmi waayo ma jiri doono farsamo neerfeed oo wax lagu liqo.
cilladaha koromosoomyada sida cilladda Down syndrome iyo Edwards syndrome, oo iyadu lafteeda inta badan la xiriirta cilladaha caloosha ku dhaca.
Qalfoofka dysplasia, ama ciriiriga. Waxaa jirta suurtagal ah in daloolka xabadka uusan ka weyneyn oo lagu keydin karo dhammaan xubnaha canugga taasoo sababi karta xiiq-mareenka iyo hunguriga in la xaddido, taasoo aan u oggolaaneyn cunuga inuu liqo xaddiga ku habboon ee dheecaanka amniotic.
Waxaa jira xaalado cudur oo dhowr ah oo uur u horseedi kara polyhydramnios. Kuwaas waxaa ka mid ah taariikhda hooyada ee sonkorowga mellitus, isku dheelitir la'aanta Rh ee uurjiifka iyo hooyada, infekshinka gudaha, iyo uurro badan.
Xilliga uurka, astaamaha caafimaad qaarkood ayaa laga yaabaa inay soo jeediyaan polyhydramnios. Hooyada, dhakhtarku wuxuu fiirin karaa cabirka caloosha oo kordhay marka loo eego saamaynta culeyskeeda iyo da'da uurka, xajmiga ilmo-galeenka ee ka soo baxa da'da uurka, maqaarka dhalaalaya ee leh stria (badanaa lagu arko polyhydramnios daran), dyspnea, iyo culeyska laabta. Markaad baareyso uurjiifka, dhawaqa wadnaha ee uurjiifka suuxsan ayaa sidoo kale calaamad caafimaad oo muhiim u ah xaaladdan.
Polyhydramnios aan caadi ahayn oo asymptomatic ah ayaa loo maamulaa si rajo leh. Haweeneyda astaamaha cudurka polyhydramnios waxay ubaahantahay isbitaal dhigid. Dawooyinka asiidh-diidka ayaa loo qori karaa si looga yareeyo laab-jeex iyo lallabbo. Ma jiro macluumaad taageeraya xaddidaadda cuntada ee milixda iyo dheecaanka. [Xigasho loo baahan yahay] Xaaladaha qaarkood, amnioreduction, oo sidoo kale loo yaqaan 'amniocentesis', ayaa loo isticmaalay jawaab-celinta polyhydramnios.
« Reply #2 on: February 11, 2021, 01:39:41 AM »
Hada xoga waan ka fahmay lkn waxaa ka buuxa ereyo badan oo "erey bixin baahan xagayga"